Wed, Jun 20, 2018 | 03:17:01 NST
लक्ष्मण कार्की - आठ बर्षअघिको साउन ६ गते झम्के साँझ पर्दै गर्दा हामीले आआफ्ना झोली तुम्बा स्याङजाको सिरुवारीमा बिसाएका थियौं ।२ दिनको यात्रापछि एक सय २४ जनाको हाम्रो विद्यार्थी पल्टन सिरुवारीको काखमा सुस्ताउन पाएको थियो ।एकदिन र एक बिहानको बस यात्रामार्फत काठमाडौबाट नौडाँडासम्म पुगेका हामी त्यहाँबाट झण्डै ७ घण्टाको पैदल यात्रा छिचोलेर गन्तब्य अर्थात सिरुवारीको काखमा लुटपुटिंदै थियौं ।
मलाई खेत पस्न के ले रोक्यो ?
विनोद ढकाल – साउनको पहिलो हप्ता पनि जान लाग्यो । हिजो बेलुकी घरमा फोन गरेको थिएँ, अझै रोपाईं भएको रहेनछ । ब्याडको विउ खेतका गरामा कसरी टाँस्ने भन्ने चिन्ता मेरो घरमा मात्र हैन गाउँभरि छ । किसानको छोरा । ज्यान जहाँ भएपनि मन खेतमै पुगेको छ ।
सुरुमा बहुला भने, चिलिमे सफल हुनै लाग्दा हटाए
कुलमान घिसिङ - यस क्षेत्रमा १५/१६ वर्ष काम गर्दा जे बुझें, त्योभन्दा बढी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा ४ वर्ष प्रबन्ध निर्देशक भएर बस्दा बुझें । मलाई पहिला पनि हटाउन खोजिएको थियो । एक वर्षअघि हटाउन खोज्दा स्थानीयबासिन्दा र कर्मचारीको विरोधले सम्भव भएन ।
‘छिटोछिटो युवापुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ’
केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष नेकपा एमाले - म यस प्रतिस्पर्धामा सहभागी कमरेड माधवकुमार नेपाल तथा अन्य कमरेडहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो पार्टीभित्रको, कमरेड–कमरेडहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हो र यसले एकता–पहलकदमी–प्रतिस्पर्धा र अझ उन्नतस्तरको एकताको मान्यता अबलम्बन गरेको छ भन्ने विश्वास म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
दुहुनो नहुँदा खिरैखिर
मिलन तिमिल्सिना – ‘बाबु आज त साउने संक्रान्ति, केही बनाएर खानु है’ आमाले भन्दा पो झल्याँस्स भएँ–आज त साउने संक्रान्ति । खिर खाने र बेलुका लुतो फाल्ने दिन । बेलुकी टोल नै झलमल्ल पार्नेगरी अगुल्टो हुत्याएर लुतो फाल्ने । लुतो फाल्ने अर्कै रमझम । खिर खाने उत्सव ।
मेरो त एसएलसीमा चौथो डिभिजन
हरिवंश आचार्य - अहिले पनि एसएलसीलाई फलामे ढोका भनिन्छ । त्यतिखेर म जस्ता मध्यम वर्गका मान्छेको उद्देश्य एसएलसी पास गर्ने, नाइट अथवा मर्निङ कलेज पढ्ने अनि एउटा खरिदारको जागिर खाने हुन्थ्यो ।
मिठाई कि मन्द विष ?
डा. अरुणा उप्रेती – एउटै तेलमा बारम्बार पकाउने जेरी, स्वारी स्वास्थ्यका लागि खराब हुन्छन् भन्दा शायद कसैलाई विश्वास नलाग्ला । तर, तेल बारम्बार तताएपछि त्यसबाट विष पैदा हुन्छ र यसले क्यान्सर जस्तो रोग पनि पैदा गर्नसक्छ भन्ने कुरा विशेषज्ञहरूले बारम्बार भन्दै आएका छन् ।
महिला जिल्ला अध्यक्ष भएकै कारण हेपिनुपरेको छैन
पदमा अर्याल – सुरुका दिनमा अरु पार्टीका पुरुष नेतृत्वसँग सहकार्यमा केही असजिलो हुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर त्यस्तो भएन । किनभने आफुले चिनेजानेकै आफ्नै सरसँगतका मान्छे भए अरु पार्टीमा पनि । हामी एउटै ‘लेभल’का मान्छे भएकाले मैंले त्यस्तो खास फरकपना महशुस गर्नपरेको छैन ।
खाडीमा एक नेपाली उद्दारक
मेघराज सापकोटा – ‘दाइ, हजुरलाई लैजान्छु भनेको ठाउँमा आज जाने हो ?’ गाडीमा बस्ने बित्तिकै रेशम लामा भन्दै थिए । बेलुकीको ८ बजेको हुँदो हो । उनी नखीलबाट चालिस किलोमिटर टाढा ओमानको बोर्डर ‘शा’म’ भन्ने ठाउँमा जाने कुरा गर्दैछन् । मैले हुन्छ भनिदिएँ ।
सालको फूल टिप्न जाँदा धन्नै मरिएन
भावुक योगी – बर्दियाका जंगलहरुमा सालका रुखहरु नै बढी हुन्छन् । सालको फूलको दाल पनि बिक्री हुन्छ भनेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर २०/२५ वर्ष पहिले बर्दियामा सालको फूलको दाल पनि बिक्री हुन्थ्यो ।
आमाले पुकारेपछि कसको के लाग्छ !
मिलन तिमिल्सिना - दाइजोको निहुँमा पति र सासूले जिउँदै जलाएपछि डेढ महिनादेखि वीर अस्पतालमा उपचारार्थ बाँकेकी रिहाना शेख ढपाली घर फर्किंदा आमा, बहिनी र छिमेकीहरुले हर्षे आँशु झारे । ‘पुनर्जन्म’ पाएकी रिहानाको मायालु मुहारमा आमाले सुम्सुम्याउनुभयो । दुवैले गर्लम्म अँगालो हाले । रिहानाले आमाको आँसु पुछिदिनुभयो ।
दाँत फुस्किएपछि फुटबलको अन्त्य
विनोद ढकाल – मैले पहिलो पटक फुटबल देखेकै त्यही बेला हो । त्यसअघि न स्कुलमा खेलिन्थ्यो न त टोलमा नै टिभीमा देख्ने त कुरै छोडौं । गाउँमा बिजुली र टिभी पुग्दा म नै गाउँ छाड्ने भइसकेको थिएँ । मोजाको भकुन्डो बनाएपनि त्यसले भलिबल खेलिन्थ्यो ।
छोरीको करले आमा ४० वर्षमा गर्भवती, तर फेरि छोरी !
मिलन तिमिल्सिना - कति कुरा सुन्न नपरे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर नसुनी सुख नपाइने । ‘छोरा या छोरी, दुवै बराबरी’ भन्ने उद्गार सुन्दा जति मिठो लाग्छ, व्यवहारमा ढाल्न नसक्नेहरुको व्यथा उस्तै खल्लोे । बाबुआमाको करले होइन, हुर्केका छोरीहरुले भाइको चाहना गर्दा ४० वर्षमा आमा गर्भवती भइन् ।
त्यो हाँच्छ्युँ- जसले एक नेपालीलाई अदालत पुर्‍यायो
सिल्भिया राजोपाध्याय – गएको जेठ ३० गते बेलायतको ए ४० मा भएको सडक दुर्घटनाको सम्बन्धमा एक नेपालीले अदालतमा पेश गर्न लागेको बयान नेपालीमा अनुवाद गर्नुपर्ने ब्यहोरा सहितको इमेल आयो । जुन दुर्घटनाको कारण हाँच्छ्युँ थियो ।
झण्डै सेण्टरबाट हानेको फ्रिकिक जब गोल भयो ...
सुनिल न्यौपाने – जब–जब कुनै खेलका विश्वकप प्रतियोगिता हुन्छन्, गाउँठाउँका चौरतिर तिनै खेल खेलिरहेका भेटिन्छन् बालबालिका, किशोर र तन्नेरीहरु । त्यसैले पनि अहिले फुटवलको मौसम चलिरहेको छ । पछिल्ला केही बर्षयता नेपालमा क्रिकेट लोकप्रिय भएको छ ।
माधवकुमार नेपाल शक्तिशाली नेता हुनुपर्छ
ईश्वर पोखरेल - नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा नेतृत्व हस्तान्तरण र युवा नेतृत्वको विकासको विषय प्रमुखताका साथ उठिरहेको छ । यो प्रश्न हामी कम्युनिष्ट पार्टीमा कस्तो नेतृत्व विकास गर्न चाहन्छौं, कसरी आधुनिक ज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापनमा दक्ष र सक्षम युवाहरू नेतृत्वमा सहजै स्थापित हुने पद्धति निर्माण गर्छौैं ।
काज किरिया छोट्टयाउनुको सान्दर्भिकता
रामप्रसाद गौतम – धर्म, संस्कार र प्रथा पनि समय सापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ । ७ दिनसम्म गरिने श्रीमदभागवत सप्ताहलाई एकाहा बानाउन सहजै स्वीकार गरेको हाम्रो समाजले १३ दिनको काज किरियालाई पनि सहजताका साथ ३ दिनमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ ।
छाता भाँचिए जर्सी, मोजा च्यातिए बल
मिलन तिमिल्सिना – अलिपछि ऊनीको बाक्लो कपडालाई जर्सी भनेको सुन्दा केही साथीहरुले जिस्क्याए । ‘स्वीटरलाई पनि जर्सी भन्दोरैछ’ भनेर साथीहरुले भनेपछि जर्सी भन्न छाडियो । स्वीटर, ज्याकेट हुँदै टिसर्टमा रमाइरहँदा जर्सी बिर्सन थालियो । तर अलि बुझ्ने भएपछि फेरि जर्सीको महत्व थाहा भयो ।
दुर्गममा खच्चड ड्राइभरको शान
विनोद ढकाल – फुटवल खेलाडीले जस्तो स्टाइलिस कपाल भएको अनि त्यसमा रातो र खैरो रङ हालेको युवकले कहिले खच्चड दौडाएर त कहिले पर्खाएर हैरान बनाए । बल्लतल्ल खच्चडलाई उछिनेर अघि लागेपछि खाना खान रोकिँदा फेरि भेट भयो । उसले भन्यो ‘सर म त सिर्दिवास नजाने भएँ ।
नेपालमा मनसुनको आगमन
मणिरत्न शाक्य – मानव जीवनयापन गर्न अति नै आवश्यक पानीको स्रोतको रुपमा रहेको मनसुन, पहाडी तथा कृषि प्रधान मुलुक नेपाल जहाँ पर्याप्त मात्रामा सिञ्चाइ सुविधा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन त्यहाँको लागि वरदानतुल्य छ । तर यही मनसुनको प्रकोपले निम्त्याउने अतिवृष्टि मानव जीवन समाप्तिको कारण बन्छ ।
‘सुरक्षा चासो’ र ‘तिव्बत मामिला’को चेपुवामा नेपाल
सुनिल न्यौपाने/उज्यालो - प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अन्ततः चीनको छोटो भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किदै हुनुहुन्छ । भारतमा मोदिले प्रधानमन्त्रीको सपथ समारोहमा ननिम्त्याएको भए कोइरालाको यो भ्रमण सायद नहुन पनि सक्थ्यो । किनकी भारतको निम्ता पाउनु अघिसम्म मुख खोल्न नसकेका प्रधानमन्त्री कोइरालाको चीन भ्रमणको टुँगो त्यसपछि नै लागेको हो ।
ज्वानो मेथीमा कति धेरै शक्ति
डा. अरुणा उप्रेती - तपाईंको भान्छाघरमा रहेको ज्वानो सस्तो तथा गुणले भरिपूर्ण भएको वस्तु हो । ज्वानो आयुर्वेदका प्रवर्तक चरकका पालादेखि नै प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । पूर्वीय समाजमा मात्र नभएर ग्रीक औषधि विज्ञानमा पनि ज्वानोको महत्वलाई दर्शाइएका लेखहरू पाइन्छन् ।
तास खेल्ने कर्मचारी र सिर्दिवासका आमा समूह
विनोद ढकाल – सिर्दिवास पुगेका पत्रकारलाई कुरा सुनाउने पालो आमा समूहको आयो । उपाध्यक्ष महाकाली गुरुङ आफुहरुले गरेको काम सुनाउन थाल्नुभयो । ‘गाउँ सरसफाइ गर्छौं, नांगा डाँडापाखाहरुमा वृक्षारोपण, गर्छौं, वनमा डढेलो लाग्न पनि दिँदैनौं ।’
स्वाट्ट चुरोट तानेको त सर्केर धन्नै मरिएन
मिलन तिमिल्सिना - उखुबारे दाइले जिब्रो फड्कारेर भात खाएको, दुईपट्टीको गाला खाल्डो पर्ने गरी चुरोट तमाखु तानेको, अनि सूर्तीको डाँठ चुँडेर मुखमा बुजो लगाएको हेर्दैमा झटकलाग्ने । खेतबारी जोत्न आउँदा उनी बिहानको भात हाम्रै घरमा खान्थे । उनको कम्मरमा सधैं खुर्पीठ्याक हुन्थ्यो ।
बयान गरेरै सकिन्न दुबईको दुःखसुख
मेघराज सापकोटा – २००५ को नोवेम्बरमा जापान जाने सपना बोकेर कालिमाटीमा रहेको जापानिज भाषा सिकाउने एउटा इन्स्टिच्युटमा पुगेको थिएँ । त्यसो त सुरुमा इजराएल जाने कि इटाली जाने भनेर नचम्केको पनि हैन ।
कुन खुशीले दिपावली गरौं मन्त्रीज्यू ?
सुनिल न्यौपाने – गृहमन्त्रालयले सवै नेपालीलाई बुधबारदेखि तीन दिनसम्म दिपावली गर्न आग्रह गरेछ । सन्दर्भः गणतन्त्र दिवस । हो, देशले महत्वपूर्ण रुपमा बाटो फेरेको दिन अर्थात राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएको दिनले नेपालीका लागि ठुलो महत्व राख्छ ।
कति 'विचरा' भनेको सुन्नु ? गाली सुन्न मन लाग्यो
प्रवीणता वस्ती - प्रश्नको स्वरूप बदलिएको छ । पहिले के हुन्छ भनेर सोध्नेहरूले अब के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जिज्ञाशा राख्न थाल्नुभएको छ । धन्यवाद छ अनि आभारी छु शुभचिन्तकहरुप्रति । यो समूहमा कोही 'वकिल साहेब' हुनुहुन्छ भने पनि ठीकै छ ।
विदेशमा दुःख पाएकालाई नेपाली चेलीको साथ
सुजना राना, लेबनन – बेल्जियममा मे १२ देखि १४ सम्म भएको सेमिनारमा मैले पनि सहभागी हुने मौका पाएँ । घरेलु कामदारको रुपमा लेबननमै रहेको बेला नारी गु्रपको तर्फबाट मलाई त्यहाँ जाने अवसर जुरेको हो । त्यहाँ अमेरिका, जापान, क्यानडा लगायत सम्पन्न देशका गन्नेमान्ने मान्छेहरुको जमघट थियो ।
यो समाचार हो, यो समाचार हैन
मिलन तिमिल्सिना - ६ वर्षअघि साउन महिनाको कुरा हो । रातभरको वर्षाले बिहानपख सडक चिप्लो र भिजेको थियो । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत धादिङको सलाङघाट बजार नजिकै सडक छेउमा स्थानीयबासिन्दाले गाडीको नम्बर प्लेट भेटे । छेउका बुट्यान पनि माडिएको थियो ।
सम्बन्ध जोइपोइको तर व्यवहार किन शत्रुको ?
सुनिल न्यौपाने – कहिलेकाहिँ लाग्छ एकीकृत माओवादी फेरि फुटिहाल्यो । तर फेरि तत्कालै त्यो सामसुम भइहाल्छ । हो, कुनै प्रतिस्पर्धी दलका लागि फाइदाजनक होला तर कुनै राजनीतिक दल फुट्नु अरु धेरैका लागि लाभको विषय होइन । यसले समग्र राजनीतिक परिपाटीलाई नै कमजोर तुल्याउँछ ।
कहिलेकाहीँ चितुवाले चिथोरेपनि सधैं जित मेरै
राधाकृष्ण घर्ती – जेठ ३ गतेको विहान म ललितपुरस्थित घरमै थिएँ । शनिबार भएपनि अफिस जानुपर्ने । चिडियाखानामा रहेका जनावरको रेखदेख र हेरचाह गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो । बिरामी र घाइते जनावरको उपचार पनि मैले नै गर्छु ।
मलेसियामा झाँगिएको प्रेमले यसरी थला परें
प्रकाश काफ्ले - म आजभन्दा १० वर्षअघि मलेसियाको केलाङ्गमा रहेको एक फर्निचर कम्पनीमा काम गर्न आएको थिएँ । कम्पनी राम्रै चल्दै थियो । काम थालेको २ वर्षपछि कम्पनी झन् राम्रोसँग चल्न थाल्यो । नेपाली कामदारले मात्र कम्पनीमा काम गर्न नभ्याएपछि कम्पनीले साधारण तथा हलुंगो काम गर्न इन्डोनेशियाबाट महिला कामदार ल्यायो ।
जण्डिसको जब्बर सम्झना
लक्ष्मण कार्की - ‘आम्मुई तिम्रा आँखा के भका लक्षु ? पहेंला न पहेंला छन् त’ आँखी भौका डिल तन्काउँदै निधारमा मुजैमुजा पारेर धेरैजनाले सोधे । डेढ महिनादेखि साँघुरो कोठामा कोच्चिएर बसेको मैले कहाँबाट देख्नु आँखा कस्ता भए ?
सरले भने–हराएका मदन भण्डारी आउन सक्छन्
मिलन तिमिल्सिना - जेठको उखरमाउलो गर्मी । बिहान भात खाएर स्कूल जाँदा र बेलुका खाजा सम्झेर दौडँदै स्कूलबाट फर्किंदा खलखली पसिना बग्ने । कक्षा कोठामा पनि उत्तिकै हपहपी गर्मी । त्यसमाथि टिनको छाना भएको स्कूल । दिउँसोको गर्मीमा उकुसमुकुस हुने भएकाले बैशाख–जेठमा बिहानको पढाई हुन्थ्यो ।
समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तिको अभियान
सुनिलबाबु पन्त - समलिंगी तेश्रोलिंगी घृणा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा म यहाँहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि परिवार, समाज र राज्यले सृजना गरेका जुन पिंजडा र सिक्रिहरु छन् तिनलाई तोड्नुहोस । तोडेर फाल्नुहोस र स्वतन्त्र हुनुहोस । स्वतन्त्र हुने हिम्मत छ हामीहरुसँग ।
दही र मोहीका फाइदै फाइदा
दही र मोहीलाई पहाड तथा तराईका गाउँघरमा हिजो पनि भोजनको प्रमुख वस्तु मानिन्थ्यो भने आज पनि त्यति नै महत्व छ । पाहुनाहरूलाई सत्कार गर्दा दही ख्वाउने चलन अझै पनि छँदैछ । दही–मोही स्वादको हिसाबले मात्र नभएर स्वस्थ रहन र विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्न उपयोगी मानिन्छन् ।
कैलाश मानसरोवर जाने हवाई नाका खोल्नुपर्छ
डा. बाबुराम भट्टराई – म एक हप्ताको चीन भ्रमण गरेर फर्किंए । मेरो बुबा ८४ वर्षको हुनुहुन्छ । उहाँले मानसरोवर कैलाश भ्रमण गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएकाले र म आफैं तिब्बतको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि कसरी भइरहेको भनेर जान्न चाहन्थें ।
'श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुनु लज्जास्पद'
डा‍. महेन्द्र बिष्ट - अहिले मुलुक जटिल राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । हिजो हामीले महासंघको ब्यानरमा रहेर गरेको आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने समय आएको छ र संयोगले त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ ।
नर्वे : जान्नेको पाइला लम्कने, नजान्नेको लर्बराउने ठाउँ
सन्तोष पौड्याल - नर्वे केही वर्षयता नेपालको शैक्षिक गन्तब्यको लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । हुनपनि केही वर्ष नर्वे बसी राम्रो आर्थिक हैसियत बनाएर नेपाल फर्कने नेपालीको संख्या पनि थपिँदैछ ।
कसरी तह लगाउने भुस्याहा कुकुरलाई ?
किरण लोहनी – हरेक दिन मलाई कुकुरले हप्काउँथे, झम्टन खोज्थे । हुँदाहुँदा कुकुर पालेका आफन्तको घरमा पनि जान पनि डर लाग्ने भो । मर्निङ वाकमा निस्केकाहरुले कुकुर डोर्‍याउँदै हिंडेको देख्दा पनि रिस उठ्न थाल्यो । न दूध दिन्छ, न मासु खान हुन्छ किन कुकुर पालेका होलान् जस्तो लाग्थ्यो ।